Unyango lweSinyithi yeNtsimbi |
Unyango lwensimbi Metal
Kule mihla yanamhlanje inesantya esiphezulu sokushishina, ishidi lesinyithi lesiko alinakuhlangabezana neemfuno zabathengi ngenxa yobushushu balo obungalunganga, isandi sokungabikho kwemisindo kunye nokuhamba lula.
Ukusombulula ezi ngxaki, iSmartRoof, eliqela ebeligxile kuphuhliso lwezinto ezinophahla ngaphezulu kweminyaka engama-20, lenze ngempumelelo isisixhobo esitsha sentsimbi sokwanelisa ngemibuzo yabathengi, ngakumbi kwicandelo lezemveliso nezolimo.
Ukuphakama kwensimbi yentsimbi ye-UV:
Thelekisa iphepha lesinyithi lesiko, i-SmartRoof Steel, ubushushu bunciphise ukuya kuma-degrees angama-45 kunye nesandi sokunciphisa ukuya kuthi ga kwi-40 dbs. Kwaye kwimozulu eqatha, i-Smart Roof Steel inokuthi ithwale amaqondo obushushu angama-150 kunye namaqondo angama-40 eqondo lokuthoba lobushushu. Eyona nto ibalulekileyo kukugcina iindleko, kuba i-SmartRoof Steel idibanise umsebenzi wobushushu kunye nokusebenza kwesandi kunye akukho mfuneko yokuxhomekeka kwinto eyongezelelweyo. Malunga nobude bexesha lokuphila, qinisekisa ukuya kufikelela kwiminyaka engama-20, kabini ixesha elide kuneli lesiko.
I-SmartRoof Insimbi, into entsha yokwophahla yentsimbi, iya kukhokela uguquko kwihlabathi liphela. I-SmartRoof yintsimbi, imveliso eyi-smart okufaneleyo ukuba ibe yeyakho.
Iindidi I-STEEL ye-SMARTROOF
Izinto ezisisiseko iphepha lesinyithi
Ububanzi 828-840mm (emva kokubanjwa)
Ububanzi bezinto ezi-1m ukuya kwi-1.2mm
I-Zinc coating I-Z30-275g / m2
Umbala wokudibanisa Phezulu: 5-20 5m Buyela umva: 5- 10µm okanye njengemfuneko yomthengi
Umbala Ikhowudi ye-RAL Hayi. Okanye isampulu yemibala yabathengi
Unyango oluphezulu Ukudlula kwe-Chromed, eyomileyo, (un) ioyile, inqanaba eliphambili
wonke umphezulu wenxalenye unokupeyintiwa njengophawu lomthengi
Isithuba Rhoqo, zero, isikwere esincitshisiweyo
Isisindo somzimba 1.5-3 MT okanye njengemfuno yomthengi
A. Kutheni usikhethe?
1. Amaxabiso okhuphiswano kunye nomgangatho ovela kumzi mveliso wethu
2. Kuvunywa yi-ISO9001, CE, SGS rhoqo ngonyaka
3. Eyona nkonzo ibalaseleyo ngaphakathi kweempendulo iiyure ezingama-24
4. Intlawulo eguqukayo kunye ne-T / T, L / C njl
5. Ukukwazi ukuvelisa kakuhle (50000tons / ngenyanga)
6. Ukuhanjiswa ngokukhawuleza kunye nephakheji yokukhuphela esemgangathweni
B. Singakusebenzela ntoni?
1. Isampulu inokuhanjiswa simahla.
2. Sinesitokhwe esipheleleyo, kwaye sinokuhambisa ngexesha elifutshane.Iindlela ezininzi zokhetho lwakho.
3. I-OEM kunye ne-ODM oda yamkelwe, naluphi na uhlobo lokuprinta uphawu okanye uyilo luyafumaneka.
4. Umgangatho ofanelekileyo + wexabiso loQeqeshiso + Ukuphendula ngokukhawuleza + Inkonzo ethembekileyo, yinto esizama ngayo ukukunikezela.
5. Zonke iimveliso zethu ziveliswa ngumsebenzi wethu oqeqeshiweyo kwaye sinalo iqela eliphezulu labasebenzi bezangaphandle, ungayikholelwa ngokupheleleyo inkonzo yethu.
7. Siza kubala iindleko ezinqabileyo zokuhambisa kunye nokwenza i-invoice kuwe kwakanye.
8. Jonga umgangatho kwakhona, kwaye uthumele kuwe nge-1-2 yokusebenza ngosuku emva kwentlawulo yakho,
9. Thumela imeyile nge-imeyile yokulandelela, kwaye uncede ukugxotha iipasile de ifike kuwe.
Edlulileyo: Amaphepha eSinyithi
Okulandelayo: UkuThengiswa kweZinyithi kweArhente
Iplati yokuphahla enendawo enemibala
Indawo yokuhlala yeNdlu yokuhlala
Uphahla lweNdlu yokuhlala
Indawo yokuhlala yophahla
Uphahla lwe Metal Flat
Ukuhanjiswa kweSinyithi seKhaya
Iiphaneli zensimbi ezihlanganisiweyo
Unyango lwensimbi elungisiweyo
Unyango lweZinyithi eziHlubiweyo